Nurture – Healthy Life Journal
သင့်ကလေးကို ပြောပြသင့်သော စကား ၁၀ ခွန်း
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တစ်နေ့ တစ်နေ့ မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ကလေးကို ပြောပြရတဲ့စကားတွေ အများကြီးရှိမှာပါ။ အဲဒီအထဲက ကလေးကို ပိုမိုလိမ္မာရေးခြားရှိပြီး ပိုမိုထက်မြက်ဥာဏ်ကောင်းကာ ယုံကြည်မှုရှိစေမယ့် စကား ၁၀ ခွန်းကို မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းပြောသင့်ပါတယ်။ (၁) သား/သမီး...
ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရာတွင် မိဘတို့ သိထားသင့်သည့်အချက်များ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ကလေးတစ်ယောက် မွေးကင်းစအချိန်ကစပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်မှုအပြည့်၊ ဥာဏ်ရည်ထက်သန်မှုအပြည့်နဲ့ ကြီးပြင်းလာစေဖို့ မိဘတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ကလေးတွေကို စကားပြောပေးဖို့ လိုပါတယ် ကလေးတွေကို စကားပြောပေးတဲ့အခါ အကျိုးကျေးဇူးနှစ်ရပ်ရပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ သင်ယူလေ့လာနိုင်စွမ်းတိုးတက်တာနဲ့ သင့်အပေါ် သံယောဇဉ်ချည်နှောင်မှု...
ကလေးကို ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်ရမလဲ . . .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တစ်ခါတုန်းက ဦးမြနဲ့ဦးဘဆိုတဲ့ ခြံချင်းကပ်ရပ်နေထိုင်တဲ့ အိမ်နီးချင်းနှစ်ဦးရှိပါသတဲ့။ ဦးမြက အငြိမ်းစား ကျောင်းဆရာဖြစ်ပြီး ဦးဘကတော့ နည်းပညာကို အလွန်အမင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ အာမခံအေးဂျင့်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ တူညီချက်ကတော့ သူတို့ ခြံဥယျာဉ်ထဲမှာ သစ်ပင်တွေကို စိုက်ကြတာပါပဲ။ ဦးမြက...
ပြန်တောင်းပန်ရမယ် . .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မနေ့က မြို့ထဲရောက်တော့ Junction City လေးပတ်ရင်း သူခိုးကြီးဈေးလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ရွှေ ဘုံသာလမ်းဘက်ကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ဆိုင်တွေကလည်း ပလက်ဖောင်းကို ကျော်လွန်ပြီး ကားလမ်းအထိရောက်နေ . . ဈေးဝယ်တွေကလည်း...
သားကို သင်ပေးဖို့ ဖေဖေတို့ သိထားသင့်တဲ့ အချက် ခုနစ်ရပ်
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မိသားစုတစ်စုမှာ အများအားဖြင့် မိခင်ရဲ့အုပ်ထိန်းမှုနဲ့ပဲ ကလေးတွေက ကြီးပြင်းတတ်ကြသလို မူကြိုနဲ့ ကျောင်းတွေမှာလည်း ဆရာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက အမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သားယောက်ျားလေးတွေမှာ ဖခင်ရဲ့ အုပ်ထိန်းသွန်သင်မှုကလည်း အရေးကြီးတာကြောင့် သားရှင်ဖေဖေတွေက သူ့သားကို...
အိမ်စာမလုပ်သောသားငယ်ကို လက်နှစ်ဖက်တုပ် အိမ်ပြင်ထုတ်ထားသည့်ဖခင် ဝေဖန်ခံရ
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရောင်ချူအန်ခရိုင်မှ ဖခင်တစ်ယောက်ဟာ အိမ်စာမလုပ်တဲ့ အသက် ၁၀နှစ်အရွယ်သားငယ်ကို လက်နှစ်ဖက်ကြိုးနဲ့တုပ်ကာ အိမ်အပြင်ထုတ်ထားတာကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းတွေက ကလေးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ယူကာ အင်တာနက်ပေါ်တင်လိုက်တာကြောင့် လူအများ ဝေဖန်စရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းတွေအပြောအရ ဖခင်ဟာ သစ်သီးဆိုင်ဖွင့်ထားပြီး သားနှစ်ယောက်ရှိကာ...
မိဘအုပ်ထိန်းသူတိုင်း သိထားသင့်သည့် သားသမီးပြုစုရေး နည်းလမ်းကောင်းများ
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သားသမီးမွေးလိုက်ရုံနဲ့ မိဘကောင်း ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ မိဘကောင်းဖြစ်ဖို့ သားသမီးတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြုစု စောင့်ရှောက်တတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ (၁) ကလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လှောင်ပြောင်တဲ့ စကားတွေကို တခြားသူတွေအား မပြောပါနဲ့။ (၂) ကောင်းတယ်လို့ သင်...
ငွေကြယ်စင်ယံ ကလေးတွေနဲ့ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုရှိပြီး ကလေးတွေရဲ့ရင်ဖွင့်ဖော်ဖြစ်လာစေဖို့ မိဘတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ အချက်လေး တွေရှိပါတယ်။ အေးချမ်းစွာ နေပြပါ ကလေးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို နွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆိုတတ်သူဖြစ်အောင် နေထိုင်တာက သင်လုပ်နိုင်တဲ့ စမတ်အကျဆုံးလုပ်ရပ်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် သင်တို့အိမ်ကို သင့်ကလေးနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ စုဝေးဆုံဆည်းရာ နေအိမ်လေး ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပါ။...
ကလေးပြုစုရာတွင် ဖခင်၏ အခန်းကဏ္ဍ
ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ရာမှာ မိခင်ရဲ့ တာဝန်တွေချည်းလို့ သတ်မှတ်မထားဘဲ ဖခင်တစ်ယောက်ကလည်း ကလေးကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးဖို့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကို သိနားလည်ထားရပါမယ်။ – အာဟာရ ပြည့်ပြည့်၀၀ ကျွေးရပါမယ်။ – ကစားတာလို ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ဆောင်ခိုင်းရပါမယ်။ – အိပ်ရေး၀၀ အိပ်စက်အနားယူခိုင်းရပါမယ်။ – ကလေးကို စာတွေ၊...
ကလေး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိနေအောင် ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးကြမလဲ . . .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကလေးပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါမှာ သင်က သင့်ကလေးကို ချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတာ သိသာစေ မယ့် နည်းတွေနဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါက “ ကလေးကို ချစ်ရင် သူအိပ်ပျော်နေချိန်ကျမှ နမ်းပါ” ဆိုတဲ့ စကားနဲ့တော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေ ပါလိမ့်မယ်။...